Taariikhda Hugo Chavez - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Taariikhda Hugo Chavez
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 Maarso, 2013, 02:23 GMT 05:23 SGA
Madaxweynaha Venezuela Hugo Chavez, waxa uu dhintay kadib markii muddo dheer uu hayay cudurka Kansarka. Halkan ka dhageyso taariikhdii Madaxweynaha.
Madaxweynaha Venezuela Hugo Chavez, waxa uu dhintay kadib markii muddo dheer uu hayay cudurka Kansarka.
Hoggaamiyahan garabka bidix waxa uu ahaa mid ka mid ah hoggaamiyayaasha aadka u dhaliila siyaasadda Mareykanka, isaga oo u ololeyn jiray in la dhameeypo wax uu ugu yeeray awoodda xukun ee mareykanka ee Latin America.
Toban sano ka badan oo xukunka uu hayay waxa uu u dagaallamaya in awood dheeraad ah ku maamulo kheyraadka faraha badan ee dalka Venezuela, kuwaasi oo uu wax kaga qaban jiray barnaamijyo bulshada wax loogu qabto.